Eshibhile CNC ukuvula carbon steel ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Izingxenye zokuphendulela izingxenye zemishini zikulungele kakhulu ukucubungula izinhlobo zomsebenzi ezifana nezingxenye ezigobile namathuluzi wokwenza amathuluzi agobile. Izingxenye ezigobile zisetshenziswa kakhulu emikhakheni yezimboni, njengama-turbine blades, ama-propellers wemikhumbi, imikhiqizo yezimboni enezindawo eziyindilinga eziyindilinga, njalonjalo. Ngokuvamile, indawo egobile icutshungulwa ngokujika.
I-Carbon steel i-iron-carbon alloy enokuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.0218% kuya ku-2.11%. Ebizwa nangokuthi i-carbon steel. Ngokuvamile, iqukethe nenani elincane le-silicon, i-manganese, isulfure ne-phosphorus. Ngokuvamile, ukuphakama kokuqukethwe kwekhabhoni yensimbi yensimbi, kukhula ubunzima kanye namandla amakhulu, kepha ukwehla kwepulasitiki. Ukuphenduka kweCarbon steel CNC kusetshenziswa kabanzi futhi kufanelekile ezingxenyeni eziningi zemishini. Ouzhan ngeke efanele oyifisayo machining izingxenye ngokuvumelana imidwebo yakho kanye nezidingo.
I-Steel CNC Turning-Precision Carbon Steel Turning Parts Machining Center
Izinzuzo ze-Ouzhan Carbon Steel Turned Parts
- Intengo ephansi, kulula ukuyizwa
- Kuhle processing ubuchwepheshe
- Thuthukisa ukusebenza (C%, ukwelashwa ukushisa)
I-OEM ngokwezifiso carbon steel turning service-China Shanghai CNC carbon steel turning izingxenye umkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ingacubungula insimbi yekhabhoni enezingxenye ezizinzile nezinokwethenjelwa zokucaca okuphezulu ze-CNC. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa okusebenzayo nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini we-carbon steel. Ngaphezu kwalokho, i-CNC evula imikhiqizo yensimbi yekhabhoni inikezwe ngokuhambisana nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singanikeza ukuncintisana kwekhabhoni yensimbi ye-CNC imikhiqizo yokuguqula amakhasimende ethu awazisayo.
Ouzhan carbon steel turning izingxenye machining izingxenye izinzuzo
(1) Ukuguqula kufanelekile ukucubungula izindawo ezahlukahlukene zangaphakathi nezangaphandle ezijikelezayo. I machining ukunemba uhla ujike kuyinto IT13, IT6, futhi ebusweni roughness Ra value is 12.5 ～ 1.6.
(3) Ukuguqula kunokuvumelana nezimo okuqinile kusakhiwo, impahla, iqoqo lokukhiqiza, njll.lokusebenza, futhi lisetshenziswa kabanzi. Ngaphezu kokuguqula zonke izinhlobo zensimbi, insimbi yensimbi, nezinsimbi ezingezona ezensimbi, ingabuye iguqule okungezona izinsimbi ezifana ne-fiberglass, i-bakelite, inayiloni njalonjalo. Kwezinye izinsimbi ezingezona i-ayoni ezingakulungele ukugaya, amathuluzi wokuguqula idayimane angasetshenziselwa ukujika okuhle, okungathola ukucubungula okuphezulu nokunemba namanani amancane wobukhulu bendawo.
(4) Ngaphandle komkhawulo ongalingani wobubanzi obungenalutho, ukujika okuningi ukusika okuqhubekayo okunesigaba sokusika esilinganayo. Ngakho-ke, amandla okusika ashintsha kancane, inqubo yokusika izinzile, evumelana nokusika ngesivinini esikhulu nokusika okunamandla, futhi inokusebenza kahle kokukhiqiza.
Izinzuzo ze-Ouzhan carbon steel turning service
- Konke ukunemba kwe-CNC okuguqula imikhiqizo yensimbi yekhabhoni kungaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
-Ngokusho kwemidwebo noma amasampula wokwenza ngokunemba izingxenye zensimbi zensimbi zensimbi.
Langaphambilini Kwenziwe ngentando ithusi lokujika izingxenye zokucubungula izesekeli
Olandelayo: Umkhiqizi waseChina u-CNC owenziwe ngezifiso izingxenye zensimbi yensimbi yekhabhoni